resaka fanendahana miaraka amin’ny fampiasana fitaovam-piadiana. Manoloana ireo tranga fanendahana izay mirongatra eny am’ny faritra CENAM mivoaka any amin’ny aigle noir 67ha iny dia miezaka hatrany ny polisy ao amin’ny CSP4 an’Isotry maningotra ireo mpanao ratsy. Polisy manao fanamiana sivily, araka izany, no mandeha eny an-toerana mamandrika ireo mpanao ratsy. Ny marainan’ny sabotsy teo tamin’ny 7 ora no nandeha teny an-toerana ireo polisy ireo ka manao fanahiniana mamoaka finday avo lenta eo am-paosy ka mody milalao izany . Tsikaritr’ireto mpanao ratsy telolahy izany ka niroso tamin’ny asa ratsy izy ireo. Nosamborina avy hatrany ka tafaporisaka ny iray raha nifanenjehina kosa ny roa. Nihazo ny lalana hivoaka ny paositra 67ha ka noraisin’ny polisin’ny CSP 67ha teo am-pivoahana izany lalana izany. Mbola tratra teny amin’izy ireo kosa ny antsy fampiasany.